Taariikhda My Butros » 5 Su'aalaha aad weydiin waxaa habboon in maalinta ugu horeysa ee
Last updated: Sep. 18 2020 | 2 min akhri
Taariikhaha First noqon kartaa sida waraysiyada, laakiin naftiinna jacaylka. Waxay labada aad neerfayaasha iyo ku faraxsan. Oo marmarna aad ka heli karto naftaada si wada baabbi'isay taariikhda ee afkaartaan in dhamaadka taariikhda, inaad ku gaadhaan danihiina aad waxba barteen iyaga oo ku saabsan.
Ha isku dhibin, waxaa jira xal for this.
Kuwani 5 su'aalo xaqiijin doonaa in aad ka taariikhda ugu horeysay si kalsooni og socdaan haddii ay noqon doontaa in aad xiiseyneyso mar kale arkaya.
Waa maxay wixii aad jeceshahay inaad qabato?
Tani waa mid ka fudud tan iyo markii badan oo inaga mid ah ayaa jecel in hadalka ku saabsan nafaheena. Waxay kuu ogolaaneysaa in aad noqon dareenka on inay taariikhda iyo runtii bartaan waxa iyaga ku keenaa farxad. Sida caadiga ah marka aad weydiiso su'aashan, taariikhda ayaa sidoo kale daaha ka qaadi doonaan ay necebyihiin. Qaado note of wanaagsan iyo diidmo - qarsoon ee jawaabaha ay noqon kartaa fikrad weyn oo lagu taariikhda labaad ku salaysan danaha ay.
Muddo intee le'eg ayaad hal?
Waxaa laga yaabaa in taasi u eg tahay su'aal raaxo la'aan, laakiin waxa muhiim ah. Ogaanshaha haddii aad taariikhda u doorta in ay tahay mid kasoo horjeeda ugu sameyn hal laakiin si firfircoon u raadinta, kuu sheegi doonaa haddii aad maal waqti aad si caqli galay taariikhda ugu horeysay tan. Waxaad doonaysaa in la hubiyo in gool xiriir aad u dhigma. Waxa la soo dhaafay aad rabto waa in labada idinka mid ah in ay doonayaan in waxyaabo kala duwan iyo in la helo tan taariikhaha badan ka dib.
Ma leedahay walaalaha kasta?
Waydiinta su'aashan waa weyn yahay, maxaa yeelay mar kale, aad ay u janjeedhsadeen diiradda on inay taariikhda. Waxa kale oo aad adeegsiga fikirradooda on qoyska. Xataa waxay muujin karaan haddii ay iyagu jeclaan lahaa inuu ku soo bilowdo qoyska ka mid ah oo u gaar ah. Su'aashani waxay ku siin doontaa wax badan in laga hadlo tan iyo markii ay jiraan had iyo jeer waa sheeko weyn ku xeeran mowduuca ah walaalaha.
Tani waa oldie ah laakiin Goodie. Waa fikrad fiican haddii aad rabto inaad weydiiso su'aashan bilowga taariikhda. Dadka ku xiran yihiin calaamadaha Burji iyo xitaa haddii aanay rumaysan Chaldeans, weli waa ay gebi ahaanba u furan maqalka waxa aad u ogaato oo ku saabsan calaamadaha. Calaamadaha Burji waa muddo kordhin kale nafteena iyo sida aadanuhu ay jiraan wax aan jeclahay in ka badan barashada waxyaabo cusub oo ku saabsan nafaheena.
Maxaad u raadiyo in la Wadaage?
Tani waa su'aasha ugu horeysay taariikhda oo muhiim ah. Waa wax badan oo daters fogaado weydiinaya sababtoo ah ma doonayo in aan lagu cabsiiyo qofka kale iska. Laakiin waydiinta su aashan ayaa siin doonta fikrad nooca dadka in aad ugu taariikhda ee isha iyo halka aad dul saarto ilaa marka la barbardhigo. Isku day inaadan noqon qof ku xukumayn ee jawaabahooda haddii aadan ku raacsanayn iyaga la. Tani waxay ku salaysan yahay dano gaar ah oo ay tahay in la aqbalo sida. Ka dib markii su'aashan waxaa ku hayaan, waxaad ogaan doontaa si hubaal ah haddii taariikhda ugu horeysay tan leeyahay awooda uu ku magooli galay wax badan oo dheeraad ah.